Shoko kumhou dzekuBhashani (1-3)
Jehovha anotsvinyira vaIsraeri nekunamata kwavo kwenhema (4, 5)
VaIsraeri vanorangwa asi havateereri (6-13)
“Gadzirira kusangana naMwari wako” (12)
‘Mwari anoudza munhu pfungwa dzake’ (13)
4 “Inzwai shoko iri imi mhou dzekuBhashaniDziri mugomo reSamariya,+Imi vakadzi vari kubiridzira vanhu vakaderera,+ muchidzvinyirira varombo,Imi muri kuti kuvarume* venyu, ‘Tiunzirei zvekunwa!’ 2 Changamire Ishe Jehovha apika neutsvene hwake achiti,‘“Inzwai! Mazuva achasvika aachakusimudzai nezvinoshandiswa kukochekera nyama nemunhu anouraya mhukaUye vanenge vasara pakati penyu achavasimudza nezvirauro. 3 Muchabuda nemunzvimbo dzakaputsika rusvingo, mumwe nemumwe nepaanenge akatarisana napo;Uye muchakandwa kuHamoni,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.’ 4 ‘Uyai kuBheteri mutadze,*+Uye uyai kuGirigari mutowedzera kuita zvivi zvenyu!+ Uyai nezvibayiro zvenyu+ mangwanani,Nezvegumi zvenyu+ pazuva rechitatu. 5 Pisai chibayiro chekuonga chezvingwa zvine mbiriso;+Shevedzerai muchizivisa nezvemipiro yenyu yekungopawo muchizvidira! Nekuti ndizvo zvamunofarira, imi vanhu veIsraeri,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 6 ‘Ndakaita kuti mazino enyu achene nekushaya zvekudya mumaguta enyu ese,Uye ndakaita kuti mushayiwe zvekudya mudzimba dzenyu dzese;+Asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 7 ‘Ndakaregawo kukunayisirai mvura kwemwedzi mitatu kukohwa kusati kwasvika;+Ndakaita kuti mvura inaye mune rimwe guta asi mune rimwe musina. Mvura yainaya mune mumwe munda,Asi mumwe waishaya mvura, wobva waoma. 8 Vanhu vemumaguta maviri kana matatu vaidzedzereka vachienda kuguta rimwe chete kuti vanonwa mvura,+Asi vaisawana mvura inovakwanira;Kunyange zvakadaro, hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 9 ‘Ndakaita kuti zvirimwa zvenyu zvitsve uye zviore.+ Makava nemapindu akawanda neminda yemizambiringa yakawanda,Asi mhashu dzaiparadza mionde yenyu nemiorivhi yenyu;+Kunyange zvakadaro, hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 10 ‘Ndakakutumirai denda rakafanana neriya rekuIjipiti.+ Ndakauraya majaya enyu nebakatwa,+ ndikatora mabhiza enyu.+ Ndakaita kuti kunhuhwa kwemisasa yenyu kusvike mumhino dzenyu;+Asi hamuna kudzoka kwandiri,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 11 ‘Ndakakuparadzai,Sekuparadza kwandakaita Sodhomu neGomora.+ Uye makaita sedanda ravhomorwa mumoto;Asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 12 Saka ndichakuitira zvakafanana naizvozvo, iwe Israeri. Gadzirira kusangana naMwari wako, iwe Israeri,Nemhaka yekuti ndichakuitira izvozvo. 13 Nekuti ndiye akaumba makomo+ uye akasika mhepo;+Anoudza munhu pfungwa dzake,Anochinja mambakwedza kuti ave rima,+Uye anotsika panzvimbo dzakakwirira dzenyika;+Iye anonzi Jehovha Mwari wemauto.”
^ Kana kuti “kuna vanatenzi.”
^ Kana kuti “mupanduke.”